थाहा खबर: कालोपत्रे भएकाे दुई साता नबित्दै सडक भत्कियो
कालोपत्रे भएकाे दुई साता नबित्दै सडक भत्कियो
तनहुँ : धार्मिक तीर्थस्थल छाब्दी बाराही मन्दिर जाने सडकको कालोपत्रे दुई साता नबित्दै भत्किएको छ। तीन तहको लगानीमा चार किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण भए पनि प्रदेश सरकारले लगानी भएको क्षेत्रको सडक भत्किएको हो।
तीन तहको सरकारको लगानीमा वहुचर्चित छाब्दी मार्गमा कालोपत्रे गर्ने काम शुरु भएदेखि तनहुँका प्रमुख दलका नेताहरुले आफ्नै कारणले कालोपत्रे भएको अभिव्यक्ति दिइरहेको समयमा कालोपत्रे भत्एिको छ। सडक निर्माणमा कस्तो सामग्री प्रयोग गरिएको छ, कामदारले काम कस्तो गरेका छन् भन्ने विषयलाई वेवास्ता गरेर बनेको सडक कालोपत्रे गरिएको दुई हप्ता नपुग्दै भत्किएको छ।
मौसमको समेत वेवास्ता गर्दै असारको अन्तिम हप्तादेखि अविरल झरीसँगै छाब्दी बाराही जाने मोटर मार्ग कालोपत्रे गर्न शुरु गरिएको हो। संघीय सरकारको लगानीमा उक्त मार्गमा पहिलो चरणमा व्यास नगरपालिका १ स्थित कुन्छाली गाउँदेखि व्यास नगरपालिका १२ भड्खालासम्मको ८ सय मिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको थियो।
कुन्छाली गाउँदेखि भड्खालासम्मको सडकको पहिलो खण्ड संघीय सरकारको एक करोड बजेट, भड्खालादेखि गौडापहरासम्म दोस्रो खण्डमा व्यास नगरपालिकाको दुई करोड र गौडापहरादेखि छाब्दी मन्दिरसम्मको तेस्रो खण्डमा प्रदेश सरकारको एक करोड बजेटबाट कालोपत्रे गरिएको हो।
संघ र प्रदेशको बजेटबाट कालोपत्रे हुने सडकको ठेक्का डायमण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि दमौलीले पाएको थियो। छाब्दी मार्ग उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मणिजंग बस्नेतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडक भत्किएको बताए।
‘उपभोक्तासँग समन्वय नै नगरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणको काम भएको र प्रदेश सरकारले एक्लै निर्णय गरेको भएर यस्तो अवस्था आएको हो’ उनले भने, ‘इन्जिनियर को हो। के हो उपभोक्ता समितिलाई समेत थाहा छैन। कसरी निर्माण गरिएको छ। हामीलाई पनि थाहा छैन।’ ‘यो सडक कालोपत्रे नहुँदा वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले समस्या हुन्थ्यो।
अब त्यो समस्या टर्‍याे भन्ने लागेको थियो। तर सडक बनाएको दुई साता नपुग्दै भत्कियो’ व्यास १२ छाब्दीकी स्थानीयवासी लक्ष्मी पन्थले भनिन्, ‘जनतालाई झुक्याएर आफ्नो र दलको काम भनेर मात्रै गरेका रहेछन्।’ त्यस्तै एक बृद्धाले नाम नबताउने भन्दै ‘जनतालाई झुक्याएको नि ! काम गरे जस्तो गरेर, असार, साउनमा पानी बढी पर्छ। यस्तो समयमा सरकारी पैसा फालेको नि ! जाडो मौसममा कालोपत्रे गरेको भए पक्की हुने थियो।’ त्यस्तै व्यास नगरपालिकाको ठेक्का जिएस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.दमौलीले पाएको थियो।
जिएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि दमौलीको प्रमुख आरसी पौडेलले मुख्य सडकमा जोडिएको शाखा सडकबाट लोड गाडी ट्याक्टर जबरजस्ती सडकमा लगिँदा भत्किएको बताए। ‘शाखा सडक भन्दा निर्माण गरिएको सडक अग्लो बनेको र त्यसमा जबरजस्ती लोड गरिएको गाडी ल्याउँदा छाब्दी मार्गको सडकमा भत्किएको हो’ उनले भने।
कालोपत्रे गर्दा र सडकसँग जोडिएका शाखा मार्ग जोडिने स्थानमा स्लोप बनाउनपुर्ने प्रावधान भए पनि सडकका विभिन्न भागमा स्लोप निर्माण गरिएको छैन। यसले गर्दा पनि सडकसँग जोडिने शाखा बाटोबाट चल्ने सवारीले सडक अझ छिटो भत्किने सम्भावना बढेको छ। स्थानीय हरि खनालले सडक कालोपत्रे गर्दा निर्माण पक्ष र इन्जिनियरले गुणस्तर र आवश्यक मापदण्ड समेत पुरा नगरेको देखिएको बताए।
सडक निर्माण गरिँदा शाखा बाटोमा सपोट नराख्दा यस्तो समस्या भएको हुन सक्ने उनको बुझाई छ। छाब्दीको बस पार्कसम्मको तेस्रो खण्डमा प्रदेश सरकारको एक करोड लगानीबाट गरिएको कालोपत्रे दुई हप्ता नपुग्दै उक्किन थालेपछि छाब्दीवासी निराश भएका छन्।
विसं.१८०० मा पानीमाथि छाब्दी बाराही मन्दिर निर्माण भएको थियो।